लकडाउन लम्बिदै जादाँ राहत पाउने र नपाउँने परिवारलाई समस्या « Online Rapti
कपिलबस्तुमा लागु औषध सहित एक ब्यक्ति पक्राउ
दशैं टिका उत्तम साइत विहान १०ः१९ बजे , टिका लागउने पूर्व र लगाइ माग्ने पश्चिमतर्फ फर्कने
पुरन्धारा झरणामा शिवको मुर्ति तथा काठको बार तोडफोड
मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्नलाई प्रचण्डद्धारा कारबाहीको माग
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
लकडाउन लम्बिदै जादाँ राहत पाउने र नपाउँने परिवारलाई समस्या
अनलाइन राप्ती २०७७ बैशाख १५ गते सोमवार
शान्तिनगर,१५ बैशाख, एक महिना भन्दा बढि लकडाउन (बन्दाबन्दी) भएपछि यतिबेला सबै भन्दा बढि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरी खाने परिवारहरु मारमा परेका छन् । विभिन्न जिल्ला काम गर्न गएकाहरु केही पैदल यात्रा गरेका आएका छन् भने कोही काम बन्द हुदाँ घर मै बस्न बाध्य भएका छन् । लकडाउन लम्बिदै गएपनि दाङका १० स्थानियतहरुले पहिलो चरणको राहत दिई सकेका छन् ।
तर पनि त्यो राहत अझै पनि धेरैले नपाएको गुनासो गरेका छन् । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका ७ दुविचौरका ७९ बर्षिय हुर्मत नेपालीले वडाले दिएको राहत नपाएको गरे । उनले आफु राहत लिन आउँदा सकियो भनेर नपाएको बताए । नेपालीका ५ जना परिवार छन् । ‘छोरा भारत कमाउन गएका र लकडाउनले गर्दा उतै समस्या परेको छ, घरमा कमाउने मान्छे छैन्’ उनले भने ,’ शनिवार एक जना युवा ब्यवसायीले राहत दिने भनेर वडाबाट जानकारी पाएपछि लिन आएको हु ।
अहिले १० किलो चामल र १ किलो नुन पाए यस्ले कति दिन होला ।’ त्यसैगरी सोही वडाकी मिना जैसीले पनि राहत नपाएको गरिन् । ‘श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि लकडाउनको कारणले काम बन्द छ ’ उनले भनिन्,‘ घरमा छोरा छोरी सासु सुसुरा गरी ५ जनाको परिवार छौँ । न त यहाँ काम गरौँ काम छ, न त विदेश श्रीमानको कमाई छ । यो बन्द कहिले सम्म हो । ’ शनिवार एक जना ब्यक्तिले दिएको १० किलो चामल र १ किलो नुन पाए, त्यसले कति दिन पुग्छ ? ’
त्यसैगरी सोही वडाकी सुशिला विकले पनि राहत नपाएको बताईन् । वडाले राहत दिएको भएता पनि आफुहरुले नपाएको बताईन् । घरमा ७ जनाका परिवार छ, उनले भनिन् ,‘ काम गर्ने ४ जना हो । तर अहिले एक महिना भन्दा बढि बन्द हुदाँ बेरोजार भैयौँ, गाउँमा अईचो पैचो गरेर दैनिकी चलेको छ । ’शनिवार आफुले एक जना ब्यवसायीले दिएको १५ किलो चामल र १ किलो नुन मात्र पाएको र यसले पनि कति दिन हुने हो थाहाँ छैन्,’ उनले भनिन् ।
बन्द कहिले सम्म हुने हो त्यो पनि छैन् बरु वडामा हुने विकास निर्माणमा आफुहरुलाई रोजगार दिए सहज हुने उनले बताईन् । त्यसैगरी वडा नं. ७ धनौराका १५ बर्षिय राजेश रानाले पहिले वडाबाट २५ किलो चामल, दाल, नुन र तेल पाएको भन्दै त्यो पनि सकिन लागेको उनले बताए । ‘ आमा बुवा हुनु हुन्छ, घरमा ४ भाई बहिनी मात्र छौं’ दिदीले र दाईले मजदुरी गर्नु हुन्छ, उनले भने,‘ अहिले लकडाउनको कारण काम बन्द भएपछि समस्या भएको छ ।’
शनिवार ब्यक्तिले सहयोग गरेको १० किलो चामल र १ किलो नुन पाएको भन्दै यस्ले पनि धेरै दिन नहुने बताए ।
‘लकडाउन लम्बिदै गएको छ, कामकाज केही छैन्, कसरी दैनिकी चलाउने समस्या छ’, उनले भने । यता वडा कार्यालयले भने राहतको लागी १२५ जनाको लिष्ट पठाएको भएता पनि गाउँपालिकाले ८५ जनाका लागी मात्र राहत दिएको वडाध्यक्ष पिमलाल वलीले बताए ।
गाउँपालिकामा ७ वटै वडाहरुले राहतको लागी लिष्ट पठाएको भएता पनि कुनै वडाले जति पठाए त्यति नै पाएको आफ्नो वडाबाट पठाएकोमा ५० प्रतिशतलाई मात्र राहत आएको र त्यहि आफुले वितरण गरेको वडाध्यक्ष वलीले बताए । बांकी नपाएका घरपरिवारहरुलाई विभिन्न ब्यक्तिहरुले दिएको राहत वितरण आएको उनले बताए । दंगीशरण गाउँपालिकाका ६ का युवा ब्यवसायी जयराम वलीले सहयोग गर्नुभएको राहत नपाएकालाई वितरण गरेको उनले बताए ।
‘हामीले ५० जनालाई भनेर ब्यवसायी वलीलाई जनाकारी गराएका थियौ,’ उनले भने, ‘ ६४ जना राहत लिन आएपछि सबैलाई मिलाएर दियौं । ’ त्यसैगरी अहिले वडामा बाहिर जिल्लाबाट आएका ब्यक्तिहरुलाई वडाले नै खैरेनीमा रहेको वन कार्यालय भवनको क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था गरी ४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा बसालेको उनले बताए ।